Funny रमाईलो व्यापार कार्डहरू जुन तपाईंको ग्राहकहरूसँग LOLing हुन्छ - Print Peppermint
Funny रमाइलो व्यापार कार्डहरू जुन तपाईंको ग्राहकहरूसँग LOLing हुनेछ
अक्टोबर 1, 2018 | व्यापार कार्ड आधारभूत, डिजाइन हास्य
तपाईंलाई थाहा छ उनीहरू के भन्छन्, "सबै काम र कुनै खेलले ज्याकलाई सुस्त केटा बनाउँदछ।" ज्याक को हो? हामीलाई कुनै विचार छैन। तर हामीलाई थाहा छ हास्यास्पद व्यापार कार्डहरू छन्। यहाँ तिनीहरू मध्ये7छन् जुन तपाईंको ग्राहकहरू सबै दिन LOLing (वा कमसेकम राम्रो मिनेट) हुनेछ।
कीवर्ड (हरू): हास्यास्पद व्यापार कार्डहरू
यदि तपाईंले कहिले फिल्म हेर्नुभएको छ अमेरिकी मनोको, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी महत्त्वपूर्ण व्यापार कार्डहरू छन्।
तर, उनीहरूले बयान गर्न यत्तिको गम्भीर हुनुपर्दैन। वास्तवमा, तपाईंको व्यवसाय कार्ड फनियर अझ बढी कथनको रूपमा लिनेछ।
हास्यास्पद व्यापार कार्डहरूको सूची जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई LOL'ing प्राप्त गर्दछ।
तपाईलाई आफ्नै बनाउनको लागि मात्र प्रेरित हुन सक्छ!
शारीरिक (हास्य) प्राप्त गरौं
शारीरिक हास्य टीभी वा व्यक्तिमा अनुवाद गर्न सजिलो छ (नोट नोट थ्री स्टूज।)
व्यापार कार्डको बारेमा के हुन्छ? सबै पछि, यो कागजको एउटा टुक्रा मात्र हो। कार्ड स्टकको एक टुक्रा लिन र यसलाई प्रफुल्लित बनाउन कसरी सम्भव छ?
क्रीम पाई टाढा राख्नुहोस् र प्वालबाट प्वाल निकाल्नुहोस्। बाहिर जान्छ, सबै ले यो एक चक्कल प्राप्त गर्न दुई राम्रो राखिएको प्वाल हो।
यो व्यवसाय कार्ड देखाउन जान्छ कि हास्यास्पद boobs मात्र टेलिभिजन मा सम्बन्धित छैन।
यसलाई प्रकाश गर्नुहोस्
हामी सबैलाई सबै भन्दा राम्रो तरिका थाहा छ एक व्यापार कार्ड बनाउनुहोस् यादगार यसको लागि हास्यास्पद हो। तर, यदि यो भन्दा बढि के गर्न सक्दछ भने के हुन्छ? भन्नुहोस्, उदाहरण को लागी एक खराब बानी खान?
यो व्यवसाय कार्ड ले “धुम्रपान” Em लेराउँदछ यदि तपाईंले तिनीहरूलाई पाउनुभयो सम्पूर्ण नयाँ स्तरमा।
क्रूर ईमानदारी उत्तम नीति हो
यदि तपाईं व्यवसाय कार्ड पठाउन लाग्नु भएको छ भने, यसमा सबै भन्दा बढि जानकारी हुनुपर्छ। सबै पछि, तपाईं आफूले फिर्ता बोलाउन बाहिर बाहिर तपाईंले चाहनुभएको व्यक्ति चाहनुहुन्छ।
तर कहिलेकाँही, तपाईको बारेमा सब भन्दा महत्वपूर्ण जानकारी तपाईलाई विज्ञापन गर्न नचाहेको कुरा हुन सक्छ। यो मान्छे जस्तै प्रकारको।
हे, कम्तिमा ऊ इमान्दार छ, हैन?
यदि तपाईं एक अद्वितीय नाम संग आशीर्वाद छ, तपाईं यसलाई संग पूर्ण रूपमा चलाउनु पर्छ। र, यदि तपाईं त्यो नाम प्रख्यात रक स्टारको साथ साझा गर्नुभयो भने, तपाईंले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तपाईका अभिभावकहरु लाई यो चाहिएको थियो
त्यसोभए, बोरिंग नगर्नुहोस्। स्टीव मिलर जस्तो हुनुहोस्। एक उत्तम व्यापार कार्ड बनाउनुहोस्।
तपाईंको मासु खाऊ
हे अब, आफ्नो टोकरीबाट बाहिर निस्कनुहोस्!
यो व्यवसाय कार्ड शाब्दिक अस्तित्व प्रशिक्षण लिन्छ। "त्यो कस्तो छ?" तिमी सोध।
किनभने यो कार्ड झर्कोबाट बनेको छ! त्यसोभए, अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईंको मासु खान्नुहोस्, र तपाईं यो भएको बेलामा एक अस्तित्व विशेषज्ञ बन्नुहोस्।
बाँकी माथि एक कट
केवल तपाइँको नाम व्यवसाय कार्डमा नराख्नुहोस्। यसमा आफ्नो शरीर राख्नुहोस्।
यो मान्छे भीडबाट शाब्दिक रूपमा आफ्नो व्यवसाय कार्ड मा उभिएर उभिन्छ।
गोफबलहरू पनि सचेत छन् सबैले गर्नुपर्छ एक व्यापार कार्ड छ।
यो प्रफुल्लितकारी व्यवसाय कार्डले हामीलाई सोच्दै छ कि यदि साइलेन्ट बबले क्विक स्टपको अगाडि यसलाई पार गर्ला।
हास्यास्पद व्यापार कार्ड: अब के हो?
तपाईंले हास्यास्पद व्यापार कार्ड देख्नुभयो जुन चलाख देखि एकदम धेरै शाब्दिक हो।
के तपाई प्रेरित हुनुहुन्छ? महान! हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तपाईंको आफ्नै प्रफुल्लितकारी व्यवसाय कार्ड बनाउन।
F ter पत्र फन्टहरूको बिभिन्न प्रकारहरू प्रयोग गर्नका लागि सुझावहरू
स्टिकर मार्केटिङ 101: के व्यवसायिक स्टिकरहरू अझै सान्दर्भिक छन्? →